Par Taratra sur 30/05/2016
Betsaka ireo renim-pianakaviana nitaraina ho niharan’ny fanendahan’ireo tontakely teny Analakely, ny faran’ny herinandro teo. Nifanitsakitro rahateo ireo mpiantsena ho fankalazana ny « Fetin’ny reny » ka nanjaka toy izany koa ireo mpanao sinto-mahery. Lasa mitsoaka eny anaty pavillon avy hatrany ireo jiolahy rehefa avy manendaka ary misolo akanjo.
Fiara Renault express no nifandona tamin’ny Sprinter iray teny Tongarivo, ny asabotsy alina teo. Noho ny fandehanana no voalaza fa nahatonga ny loza, araka ny fanazavan’ireo nahitana ny fitrangan’ny loza. Potika mihitsy ilay fiarakely notrongisin’ilay Sprinter. Tsy nisy ny aina nafoy.
Lasan’ny jiolahy maromaro nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika ny lavanila 200 kg an’ny raim-pianakaviana iray tao an-tsahana vanille ao Antanety Ampanakana Sambava, ny herinandro teo. Voalaza fa mirongatra izaitsizy ny halatra lavanila any an-toerana amin’izao. Ireo lavanila maitso no tena lasibatr’ireo jiolahy. Nidina teny an-toerana ny zandary nanao ny fanadihadiana.